Discourses in Media, Globalization & Culture: बुढो रुखको आत्महत्या (कथा)
बुढो रुखको आत्महत्या (कथा)
डाँडाको टुप्पोमा वर्षौँदेखि एक्लै उभिइरहेको छु । आउने जाने मान्छेहरु मेरै छहारीमा एकछिन बिसाएर जान्छन् । आफ्नो बिरानो नभनी सबैलाई छहारी दिएकै छु । तर तिनैले नै हिँड्ने बेलामा भन्छन् कस्तो एक्लो रुख । पक्कै यो डाहाडे हुनुपर्छ र अरुलाई छेउमा पर्न पनि दिएको छैन । एकलकाँटे । आदि इत्यादी । यी सबै कुरा मैले पचाइरहेकै छु । तर कहिलेकाहीँ उनीहरुलाई पनि आफ्नो बारेमा केही भनिदिउँ कि झैँ त लाग्छ । भन्न मन लाग्छ मैले जति हुरीबतास वर्षा र आँधी कसले सहेको छ? यसरि उभिन मैले कम परिश्रम गरेको छु?
तर मान्छेको जातै न हो आफ्नो बिचार काटिएको कहाँ सुन्न सक्छ र? त्यसैले धैर्य गरेरै बसेको थिएँ । एक्लै भएपनि जिन्दगीलाई जसोतसो घिसारेकै थिएँ । शीर ठाडो गरेर उभिएकै थिएँ । जिन्दगीमा सधैँ अझै धेरै बाँच्ने र मानिसहरुलाई छहारी दिइरहने आशा थियो । तर आज भने मनै मरेर आयो । बाँच्नुको आकाँक्षा नै मरेर गयो । त्यसैले यो कथा भन्दैछु ।
मेरो जन्म १९५० तिर भएको हो । अहिले साठी काटियो । खासमा हाम्रो परिवार ठुलो थियो । मेरा वरिपरी मजस्तै अरु नौवटा बिरुवा थिए । शायद कुनै चराको कृपाबाट बीउ यो ठाउँमा आइपुग्यो र समयमै पानी परेकाले हामी उम्रेर बाँच्न सकेका थियौँ । विभिन्न समयमा आएका हुरी बतास र हिउँबाट थलिएर बिस्तारै मेरा दाजुभाई एकएक गरी खिङ्ग्रिङ्ग पर्दै गए र सबै मरे । बस म एउटाले हुरी सहेँ । बतास सहेँ । वर्षैपिच्छेजस्तो पर्ने हिउँबाट बचेँ । सजिलोमा मात्तिइन, अप्ठ्यारोमा आत्तिइन । बिस्तारै मेरो शरीर मोटाउँदै गयो । र अग्लिँदै गएँ । अहिले त डाँडाको टुप्पो समेत आफुभन्दा तल पाउँदा मन त्यसै खुशी भएर आउँछ । आफुले गरेको परिश्रमको फल प्राप्त भएजस्तो लाग्छ । तर आज भने मनै मरेर आयो । बाँच्नुको आकाँक्षा नै मरेर गयो ।
यहाँ एकै ठाउँमा ठिङ्ग उभिइराखे पनि मैले वरिपरिका सात गाउँसम्मको खबर राख्छु । किनकि सबै गाउँका मान्छेहरु यो बाटो हिँड्छन् । खुइय्य गर्दै मेरो छहारीमा एकछिन बिसाउँछन् । त्यही मौकामा पनि उनीहरुले गाउँको खबर भनिहाल्छन् । खासमा त्यो उनीहरुले एकार्कालाई भनिरहेका हुन्छन् । तर सुनिरहेको हुन्छु मैले । मान्छेले त एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिन्छ । यो देशमा प्रजातन्त्र आएको म जन्मँदाकै वर्ष हो जस्तो लाग्छ । तर त्यसको कथा पनि बुढापाकाको मुखबाट सुनेको छु । धेरै बुढाहरु प्रजातन्त्रले सपनामात्र बाँड्यो । उपाय बाँड्न सकेन भन्छन् । कोको मिलेर बल्लबल्ल पाएको प्रजातन्त्र पनि दरवारमा लगेर बुझाए पनि भन्छन् । मैले त सुनेको कुरामात्र हो । पक्का थाहा भएन। कहिलेकाहिँ बाटो हिँड्नेले रेडियो बजाउँदै हिँड्छन् । काठमाडौँबाट नै बज्ने यो रेडियोमा पनि यस्तै कुरा सुन्दा साँच्चै रहेछ कि जस्तो लाग्छ ।
देशमा प्रजातन्त्र आएको केही समयपछि यो डाँडाको बाटो मान्छेहरु हिँड्न छाडे । हुन त म पनि सानै थिएँ छहारी दिन सक्ने भइसकेको थिइनँ । आक्कल झुक्कल आउनेहरुले देशमा निर्दलीय व्यवस्था छ त्यसैले सजिलै हिँड्न पनि पाइँदैन भन्थे । आफ्ना कुरा पनि कानेखुशी गरे झैँ गर्थे । मैले धेरै कुरा बुझ्नै पाइनँ ।
१२-१५ वर्षपछि फेरी मान्छेहरु सल्याङबल्याङ गर्न थाले । उनीहरु दिनमा भन्दा रातमा बढी हिँड्न थाले । हिँड्दा पनि ज्यादा कुरा नगर्ने । केहीले भन्थे तिनीहरु राष्ट्रघाती हुन् । म यिनै कुरामा विश्वास गरेर उनीहरुलाई सकेसम्म छहारी दिन नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोच्थेँ । खुशीले भन्नुपर्छ पर्दा पनि परेन किनकि तिनिहरु सधैँ हतारमै हुन्थे । पछि सोच्दै जाँदा चाहिँ ती मान्छेहरु देशद्रोही हैनन् कि भन्ने लाग्न थाल्यो । चप्पलसमेत लगाउन सकेका छैनन् । खान नपाएजस्ता ख्याउटे छन् । सधैँ गम्भीर देखिन्छन् । खुसुखुसु भए पनि देश र जनताकै कुरा गरेका हुन्छन् । यसरी कुदिरहने, सधैँ काम गरिरहे जस्तो देखिने मान्छेहरु कसरी देशद्रोही हुनसक्छन्? तर पनि मैले तिनेरुलाई कहिल्यै राम्रोसँग हेरिन ।
फेरी मपनि लक्का जवान बनेँ । सबै मेरो छहारीमा आउन थाले । कुरो बुझ्दै जाँदा देशमा प्रजातन्त्र आएछ । ती रातरात खट्ने मान्छेहरु एकाएक अलप भए । मान्छेहरुले भने तिनिहरु काठमाडौँ छिरे । सिँहदरबार पुगे । के के गरे । के के गरे । तर म त यही डाँडाको टुप्पामा ठिङ्ग उभिइरहेकोले त्यती टाढा कसरी देख्नु र । उनीहरु फर्केर पनि आएनन् । मेरो सम्झना हुने त कुरै भएन शायद । मलाई भने थक्थकी लाग्यो कि ती त देशभक्त रहेछन्, त्यस्ता राम्रा मान्छेलाई मैले चिनेनछु, नराम्रो सोचेछु ।
समय न हो बित्दै जान्छ । हरेक हिउँदसँगै मेरो जवानी पनि बिस्तारै खिइँदै जान थाल्यो । तल तिरबाट बोक्राहरु निस्कन थाले । खाना र पानीको उचित जोहो गर्न नसकेर माथिबाट पनि हाँगाहरु सुकेर आउन थाले । तर मेरो भने सधैँ एउटा प्रयास रहन्थ्यो कि बसन्त लागेपछि सकेसम्म धेरै पात हाल्न सकुँ र यो गर्मी मौसममा सकेसम्म गाढा छायाँ दिन सकुँ । मैले मेरो कर्तव्य पुरा गरेकै थिएँ । यस्तैमा फेरी अर्को हल्ला आयो । अर्कोथरी मान्छेहरु जँगल पसे रे । गाउँघरका मान्छेहरुले फेरी भने यी आतंककारी हुन् । अर्काथरीले भन्थे यी त समाज परिवर्तनका लागि हिँडेका हुन् । पहिलेका यस्तै बिद्रोहीलाई समर्थन नगरेको पीडा मनमा थियो । त्यसको पनि भुलचुकस्वरुप मैले यिनलाई वास्तविक मुक्तियोद्धाको रुपमा लिएँ । कहिलेकाहीँ असिनपसिन हुँदै बन्दुक काँधमा बोकेर अनुशासनपुर्वक यो डाँडैडाँडा हिँडेको देख्दा म मनमनै पुलकित हुन्थेँ । अबचाहिँ यिनले देशको मुहार फेर्छन् भन्ने अभिलाषा आउँथ्यो ।
कहिलेकाहिँ अर्कै जङ्गी पोशाक लगाएको डफ्फा निस्कन्थ्यो । मनमा चिसो सिरेटो बहन्थ्यो । र लाग्थ्यो डङरङङ आफै लडेर बाटो नै छेक्न पाए पनि हुन्थ्यो । नजिकै कतै बन्दुक पड्केको सुन्दा सक्ने भए त आफैँ गएर ति मुक्तियोद्धाहरुको पक्षमा लडौँजस्तो लाग्थ्यो । अनुवाद हुन नसक्ने मेरा यी क्रान्तिकारी विचार मभित्रै ओइलिँदा मन हदैसम्म अमिलो हुन्थ्यो । तर मान्छेहरुले भन्थे लडाइँ जारी छ । क्षति दुवैतिर भएको छ । मुक्तियोद्धाहरु डटेर लडेका छन् र लडाइँ एकपक्षीय हुन दिएका छैनन् । सुनेर गर्व लाग्थ्यो । अनि मनमा विश्वास हुन्थ्यो कि यिनले चाहिँ साँच्चिकै परिवर्तन ल्याउने भए । यसरी केही वर्ष लगातार बन्दुकका आवाजहरु मेरो कानमा परिरहे । वरिपरिका डाँडाकाँडामा, खोँचमा, टारमा, बगरमा, शहरमा, गाउँमा, जताततै । धन्य हो मेरै छेउमा भने भएनन् । मान्छेहरु भन्थे यो मुक्तियोद्धाहरुको आधार इलाका हो त्यसैले सरकारी फौज आउन सक्दैन ।
पछि फेरी अर्को हल्ला आयो । ती मुक्तियोद्धाहरु बिजयी भए रे । अब उनीहरु साँच्चिकै देशको मुहार फेर्न काठमाडौँ जाँदैछन् रे । एकपटक त पहिलेका यस्तै कार्यकर्ताको याद आयो जो एकपटक काठमाडौँ छिरेर कहिल्यै फर्केनन् । तर यी मुक्तियोद्धाले त्यसो गर्लान् भनेर बिश्वासै गर्न मन लागेन । आफ्नै छेउमा हुर्किएका र आफैँले खुशीसाथ छहारी दिएका उनीहरुले त्यसो नगर्लान् भन्नेमा म ढुक्क भएँ । तर हिजो राती एउटा यस्तो घटना भयो जसले गर्दा मनै मरेर आयो । बाँच्नुको आकाँक्षा नै मरेर गयो ।
कथाको दोस्रो तथा अन्तिम भाग पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
Posted by Indra Dhoj Kshetri at 11:38 AM
Indra Dhoj Kshetri February 12, 2013 at 12:26 PM
Thank you all for the comments. Did you read the second part of the story? Here it is: http://mediadiscourses.blogspot.com/2012/12/blog-post_24.html
Silviya February 12, 2013 at 12:27 PM
The content is as good as the topicis #Like...
Ghamaraj February 12, 2013 at 12:27 PM
किस्ताबन्दीको कथाको पूरा प्रतिक्रिया किस्ताबन्दीमै दिनुपर्ला । तर सुरुवात राम्रो छ ।
Durga Acharya February 12, 2013 at 12:27 PM
interstaing starting.......sir keep it up..................
शिकारु केटो February 12, 2013 at 12:27 PM
k bhayecha ta hijo rati ???
MadsArea February 12, 2013 at 12:27 PM
Jiwan Kshetry February 12, 2013 at 12:27 PM
Bro this reminds me ofapoignant tale of Arun and Barun, two sons ofawidow that u wrote at school, probably when in grade6or 7. That story had an happy ending but this engaging story while havingasmooth flow, I expect, is going to haveatragic end. Tragedy of out time, which even writers cannot avoid in their creation. Anyway, eagerly looking forward to the concluding part.
shrimani khanal February 12, 2013 at 12:27 PM
बुढो रुखको आत्महत्या (भाग २)